SAMOTALIS: Xisbiga Udub oo qaadacay doorashooyinka degaanka ilaa.....
Xisbiga Udub oo qaadacay doorashooyinka degaanka ilaa.....
Musharaxa adaxweyne ee xisbiga Udub Cali Maxamed Warancade oo shir jaraa'id maanta ku qabaty Hoteel Shirqqale ayaa cod gaaban iyo cod dheer ba ku sheegay inay qaadaceen doorashada golayaasha degaanka ee dhawaan la filaayo iany dalka ka dhacdo.
Qaadacada doorashada golaha degaanka ayuu Warancade u nisbeeyay daacaayado iyo talaabooyin waxashnimo ah oo uu sheegay inay kula kaceen gudiga diiwaangelinta ururada iyo ansaxinta axsaabta siyaasada oo dhawaan sheegay inay laaleen musharaxnimada Cali Warancade iyo ku xigeenkiisa Axmed Xaaji Daahir Cilmi si looga reebo doorashooyinka degaanka ,khalkhal iyo tushuushna loo geliyo xubnihii iiyo musharaxiintii ay xulanayeen iyo taageerayaashoodaba.
Warancade wuxuu sheegay inay qaadaceen dooroshooyinka golayaasha degaanka ilaa laga helaayo gudi dhexdhexaad ah oo lagu aamini karo garsoorka axsaabta tartamaysa, iyo inta magdhaw laga siinaayo wixii Daano iyo haragdaamo ee ay gudiga diiwaangelintu gaadhsiiyeen diyaargarowgii iyo habsami u socodka hawlaha xisbiga Udub.Wuxuu Warancade hadalkiisa ku soo afmeeray inay dacwad ka dhan ah gudiga diiwaangelinta ururada u gudbin doonaan maxakmada sare sida ugu dhaqsiyaha badan.
Hoos ka akhriso warsaxaafadeedkaasi oo dhamaystiran.
UJEEDDO; XISBIGA UDUB OO QAADACAY DOORASHADA.
Inagoo ogsoon in xisbigani yahay xisbigii ugu da'da weynaa ee dalkan majaraha u hayey muddo dheer kuna hogaaminayey dalkan sinaan, Cadaalad, midnimada bulshada reer Somaliland, Horumarkooda iyo sidii dalkani u gaadhi lahaa Madaxbanaanidiisa iyo in uu helo xoriyadiisii luntay lixdankii.
Hadaba arrimahaasi ka soo yeedhay Hay'adihii qaranku u xilsaaray arrimaha Xisbiyada/ Ururada iyo doorashooyinka khaas ahaan gudida Diwaan -galinta si loo helo doorashooyin XOR IYO XALAAL AH waxaanu u aragnaa in ay qaadeen talaabooyin halis ah oo ay ugu tallo galeen in lagu reebo xisbiga udub, khalkhalna lagu galiyo bulshaweynta taageerta Xisbigan iyo musharixiinta deegaanka ee xisbiga oo baaxad weyn ku leh dalka iyo dunidaba, madaama xisbigani yahay xisbi soo jireen ah oo dalkan iyo dadkiisba qiimo balaadhan ugu fadhiya.Isla markaana ilaa hadda aanay jirin cid talaabo ka qaaday gefkaa ay sameeyeen Gudida Diiwaan Galintu oo aan ka ahayn way idinku qaldameen ee raali ahaada oo shaqadiina wata.
Sidaa awgeed waxaan bulshada Reer Somaliland iyo bulshada caalamka ee ku howlan arrimaha doorashooyinka dalka in aanu qaadacnay doorashada, ilaa iyo inta laga helayo guddiyo lagu aamini karo garsoorka axsaabta kuna sifaysan dhexdhexaad, magdhowna laga bixinayo wixii daano ah ee soo gaadhay habsami u socodka howlihii xisbiga ee dhinaca diyaar garowga doorashooyinka Deegaanka. Anagoo Dacwad rasmi ah u gudbin doona Maxkamadda sarre oo ka dhan ah Gudida Diiwaan galinta.
MUSHARAXA MADAXWEYNAHA EE